Homeसमाचारसधै हासेर लोकदोहोरि गाउने कल्पना दाहाल आज एकाएक रुदैरुदै आइन मिडियामा, आखिर किन ? (भिडियो सहित)
March 6, 2021 admin समाचार 3832
आजभन्दा १ बर्ष अघि यस्तो कहानी हा’मीले कमै देखेका छौ; देखे पनि च’लचित्रमा देखेका छौ तर एउटा यस्तो सत्य घ`टना घट्यो गायिका कल्पना दाहालको जीवनमा। पछिल्लो समय चर्चीत वक्ता रमेश प्रसाईं संग दोहोरी गाएर अझ बढी चर्चा कमाउन सफल सिन्धुपा’ल्चोककि गायिका कल्पना दाहाल काठे दोहोरी महोत्सवमा भाग लिदै फा’इनलमा पुग्दै थिईन ।
अक’स्मात उनलाई फोन आयो,फोनमा भनियो’तपाई अर्जुनको को हो?कल्पनाले भनिन ‘म अ’र्जुनको बहिनी हो किन र? ”उतर आयो “अर्जुनको डोजर दुर्घ`टनामा मृ*”त्यु भयो”।एता गीत गाउदै गरेकी कल्पना कहा सम्हा’लिन सकिन र ।
कल्पना फाइ’नलमा पुगे संगै उनि उक्त प्रतियोगिताकी पहिलो भएर ३ लाख त जितिन तर उनको दाई अर्जुन कहि’ल्यै न फर्कने गरि यो संसारबाट टाढा भए।कल्पना आफुलाई सम्हाल्दै गीत गाउन पुगेपछि जज देखि आयोजक सबै च’कित थिए धेरैले त भने ‘तिमी एक शक्तिशाली र शह’नसिल नारि रैछौ सलाम छ आज यो जित तिम्रै दाईको भएको हो’।
आज त्यहि कालो दि’नलाई सम्झेर कल्पना दाहाल रुदै मिडि’यामा आएकिछिन् । आफू जहपदे ए’कान्तमा रुने गरेको र दाईको साथि बाटोमा आउदै गरेको देख्दा दाईनै आएको जस्तो आफुलाई लाग्ने भन्दै भाव’नात्मक दोहोरि समेत कल्पनाले गाइन् । – इताजा खबरबाट
May 10, 2021 admin समाचार 2787
February 15, 2021 admin समाचार 4106
October 21, 2020 admin समाचार 8457
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220462)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212120)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211819)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210568)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209354)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208477)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206954)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206744)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175649)